Dowladda Qatar Oo Qoranaysa Calooshood-U-Shaqeystayaal Somali Iyo Kenyan Oo Weerara Sacuudiga Iyo Imaaraadka – Hornafrik Media Network
Dowladda Qatar Oo Qoranaysa Calooshood-U-Shaqeystayaal Somali Iyo Kenyan Oo Weerara Sacuudiga Iyo Imaaraadka
Wargeyska CUKAAZ ee ka soo baxa dalka Sacuudiga waxa uu shalay qoray inay heleen xog ku aadan Qorshe ay Dowladda Qatar ku qoranayso rag Somali iyo Kenyan weeraro ka fuliya gudaha dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, waa sida uu Wargeysku qoray.
Wargeyska waxa uu tilmaamay inay hay Dowladda Qatar go’aansatay qorshahaasi, 24-saacadood kadib, markii ay Dowladdaha Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar ku dareen Dowladda Qatar Liiska dalalka iyo Shaqasiyaadka taageera Kooxaha loogu yeero Argagixisadda.
Wargeyska CUKAAZ waxa kale oo uu qoray inay heleen Mcluumaadka Qorshaha Qatar ku qoranayso Calooshood-u-shaqaystaal Somali iyo Kenyan, si ay weeraro uga geystaan Magaallooyinka Riyadh iyo Abu Dhabi.
Wargeyska waxa uu tilmaamay in Warbixinadda ay heleen uu muujinayo inay Dowladda Qatar u qorsheysay Fulinta weeraradaasi lacag dhan75 million ee Riyaalka Qatar. Iyadoo Hawshaasi uu Xiriitiye ka yahay Nin u dhashay Sacuudiga oo magacisia lagu sheegay Sacad al-faqih.
Dhinaca kale, Wargeyska CUKAAZ waxa uu qoray in Maxamed Saciid Atom oo horey uga tirsanaa Alshabaab, haatanse ku sugan Caasimadda dalka Qatar ee Dooxa uu qortay dhallinyaro Somali iyo Kenyan si ay weeraro uga geystaan dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka, waa sida uu Wargeysku qoray.
Wargeyska CUKAAZ waxa uu ugu dambeyntii qoray in Warbixinta Qorshahaasi la daabacay saacado ka hor, markii ay Dowladda Maraykanka ka digtay suurta-galnimadda Weeraro ka dhaca Sacuudiga iyo dalal kale oo ku yaalla Mandiqadda.
Xaaf iyo Ku Xigeenkiisii oo Markii ugu horaysay Shir ka wada qaybgalaya.